လာမည့် coronavirus lockdown တွင်ဘာလုပ်ရမည်ကိုရှာဖွေပါ။ Martin Vrijland
လာမည့် coronavirus lockdown တွင်ဘာလုပ်ရမည်ကိုလေ့လာပါ
အတွက် Filed အပိုဆောင်းစာအုပ်လေး, NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	by မာတင် Vrijland	မတ်လ 20 2020 အပေါ်	• 19 မှတ်ချက်
အမ်စတာဒမ်မြို့တော်ဝန် Femke Halsema မနေ့ကထွက်ခွာသွားပြီ အရိပ်အမြွက် အမ်စတာဒမ်အတွက်လုံး ၀ ပိတ်ဆို့ခြင်းသည်အံ့အားသင့်စရာမဟုတ်ပါ။ On 18 မတ်လ De Telegraaf ကရဲများကသော့ခတ်ရန်အသင့်ဖြစ်နေပြီဟုအစီရင်ခံခဲ့သည်။ ၏ Telegraaf အတွက်အစီရင်ခံစာ မနေ့ည Brabant တွင်ပျံ့နှံ့နေသော coronavirus နှင့်တုပ်ကွေးရောဂါတို့ကြောင့် Rutte သည်လုံးဝပိတ်ဆို့ထားခြင်းကိုရွေးချယ်ရန် alibi ရှိလိမ့်မည်။
ဒါကတိကျတဲ့အသုံးအနှုန်းများအတွက်ဘာကိုဆိုလိုသလဲ ဆိုလိုသည်မှာသင့်အိမ်မှထွက်ခွာခွင့်မပြုပါ၊ စစ်ဆေးရေးဂိတ်များနေရာတိုင်းတွင်ရှိပြီးသင်၌ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရှိနိုင်ကြောင်း၊ သို့မဟုတ်သင်စည်းမျဉ်းများ (အမိန့်များ) ကိုလိုက်နာခြင်းမရှိဟုသံသယများသို့မဟုတ်ဖြစ်နိုင်သောလက္ခဏာများရှိပါကသင်အဖမ်းခံရနိုင်သည်။ ငါကဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာအသေးစိတ်ဖော်ပြခဲ့သည် ဒီမှာ.
ကျေးဇူးပြုပြီးတူသတင်းများကိုဖြန့်ပါ Bloomberg မှတစ်ဆင့်အီတလီ၌ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံထားရသော ၉၉ ရာခိုင်နှုန်းသောလူများသည်အခြားရောဂါများရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး၏အထုပ်ထဲထည့်သွင်းခြင်းသည်သွေးနီဥများတိုးများလာခြင်းကြောင့်နှလုံးပြproblemsနာများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ဟုဆိုသည်၊ သင်သည်ထောင်ချခံရနိုင်ခြေရှိသည်။ တောင်အာဖရိကတွင်၎င်းတို့သည်ထိုနည်းဥပဒေကိုပြဌာန်းပြီးဖြစ်သည်။ တရားဝင်ဟောပြောချက်နှင့်ဆန့်ကျင်သောမက်ဆေ့ခ်ျများဖြန့်ဝေပါကသင်သည်ထောင်ဒဏ် ၆ လကျနိုင်သည်။ အခွင့်အရေးအားလုံးကိုဒီသင်တန်းကနေဖယ်ရှားပစ်လိုက်တယ်။
နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင်သင်ဤကဲ့သို့ဖြစ်ခဲ့ပါကမသင်မနေရဆေးဝါးကိုသင်သောက်သုံးရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ နယ်သာလန်တွင်ဥပဒေပြalready္ဌာန်းပြီးပြီ ထိုဥပဒေသည် ၂၀၂၀၊ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့တွင်မဖြစ်မနေ GGZ အက်ဥပဒေစတင်ခဲ့သည်။ သင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိပါကသင်ဆေးပြားကိုမျိုချမချင်းအထီးကျန်ဆဲလ်ထဲသို့သွားရပါလိမ့်မည်။ သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိဆေးထိုးအပ်ကိုလည်းသင်လက်ခံရပါမည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ယင်းကိုဥပဒေတွင်ဖော်ပြထားသည်။
'စုစုပေါင်းပိတ်ဆို့ခြင်း' ဟူသောဝေါဟာရသည် 'အရေးပေါ်အခြေအနေ' အဖြစ်လူသိများသော 'စစ်အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေ' ထက်မကသောသို့မဟုတ်လျော့နည်းသည်။ ငါတို့ကိုယ်ပိုင်စစ်တပ်နဲ့ရဲအရာရှိတွေ၊ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းသူတို့သည်လူသားများကိုမကြည့်ရှုရန်မဟုတ်ဘဲတာ ၀ န်များထမ်းဆောင်ရန်လေ့ကျင့်သင်ကြားခံခဲ့ရသည်။ "Befehl ist befehl!"
ကျနော်တို့အမြဲတမ်းလမ်းပေါ်မှာအပြာကြီးမားပြတ်လပ်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ ထိုအပြာယူနီဖောင်းကိုစစ်တပ်ကဲ့သို့သောယူနီဖောင်းဖြင့်အစားထိုးခဲ့ပြီးအလွန်ရန်လိုသောအသွင်အပြင်၊ လင်းနို့၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန်ရေမွှား၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အမြောက်အများလည်းသေနတ်မရမှီမည်မျှကြာမည်နည်း။ အစောပိုင်း ကျွန်မခန့်မှန်း စစ်တပ်ကိုတပ်ဖြန့်ချထားမည်ဆိုပါကအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က Vlissingen သို့ရောက်ရှိလာခြင်း၏အကြောင်းအရင်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ သူတို့ကဖြစ်နိုင်အီးယူနိုင်ငံအများအပြားအတွက်ကူညီလိမ့်မယ်။
ငါဟောကိန်းထုတ်ထားသမျှအရာအားလုံးပြည့်စုံလာသည်။ ဒါကြောင့်မင်းကိုငါ့ကိုအကြောက်လွန်ရောဂါ (သို့) ပူးပေါင်းကြံစည်သူလို့မသတ်မှတ်နိုင်တော့ဘူး။ ပြောင်းပြန်အမှုဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်ထင်သည်ဟုထင်သူမည်သူမဆိုယခုအိမ်တွင်ရှိပြီးကျွန်ုပ်အတိအကျဟောကိန်းထုတ်သည်ကိုကြုံတွေ့နေရသည်။ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်အနည်းငယ်မှဆောင်းပါးများကိုသင်ဖတ်ရှုနိုင်သည်။
ငါမာစတာ script ကိုမှတဆင့်ကြည့်ရှုသောကြောင့်, ဤဟောကိန်းထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ အဲဒီစာအုပ်ကိုကျွန်ုပ်စာအုပ်ထဲမှာရေးထားတယ်။ ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးတဲ့သူတိုင်းအတွက် အချို့ဖြည့်စွက်မှုများ ရေးသားခဲ့သည်။ ထိုမာစတာဇာတ်ညွှန်းကိုနားလည်ရန်နှင့်၎င်းစာအုပ်ကိုအဖုံးမှအဖုံးအထိသင်အမှန်တကယ်ဖတ်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှောင်းပိုင်းကကျွန်ုပ်ထုတ်ဝေခဲ့သောထိုစာအုပ်တွင်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်မဖြစ်မနေကာကွယ်ဆေးထိုးရန်အခြားကူးစက်ရောဂါတစ်ခုရှိလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ခန့်မှန်းခဲ့သည်။
အဆိုပါ မတ်လ ၁၈ ရက်ဆောင်းပါး ဒီ Coronavirus ဖြစ်ပွားမှုဟာကွန်မြူနစ်အစိုးရစနစ်ကိုအတိုချုပ်ဘယ်လိုတုန့်ပြန်ခဲ့သလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့မှာအရင်းရှင်ဝါဒနဲ့အတုအယောင်ဒီမိုကရေစီတွေဟာဒီကွန်မြူနစ်ဝါဒအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့သည်။ ထို link ကို နှိပ်၍ ထိုဆောင်းပါးကိုဖတ်ခြင်းသည်လည်းအကျိုးရှိသည်။
ခင်ဗျားတို့အခုအခြေအနေတွေကောင်းနေပြီလို့ယူဆပြီး၊ ဒီမိုကရေစီကရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းပြန်လာလိမ့်မယ်၊ မင်းရဲ့လွတ်လပ်မှုအားလုံးကိုပြန်ရမယ်ဆိုရင်ငါတို့မှာလည်းရာသီဥတုပြproblemနာရှိတယ်လို့သတိရစေချင်တယ်။ ပြီးနောက် ၁၂ နှစ်အတွင်းအသေမခံရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် CO2 ထုတ်လွှတ်မှုကိုအလွန်လျှင်မြန်စွာဖယ်ရှားပစ်ရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လအနည်းငယ်အကြာကားမောင်းခြင်းနှင့်ပျံသန်းခြင်းနှင့်တပြိုင်နက်ထိုတိုင်းတာမှုများသည်တိုင်းတာထားသော CO12 အဆင့်များအတွက်မည်မျှစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းကြောင်းဖော်ပြခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အရေးပေါ်အခြေအနေကိုထိန်းသိမ်းရန်နောက်ဆုံးပေါ်အလီဘာဘာရှိသည်။ ။
Chaos ရောက်လာပြီး Telegraaf သည်မတ်လ ၁၈ ရက် (ရဲများကပိတ်ဆို့ခြင်းအတွက်ပြင်ဆင်နေခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းစကား) တွင်လူအများတစ်ချိန်ချိန်တွင်နားလည်မှုနှင့်စိတ်ရှည်မှုပျောက်ဆုံးမည်ဟုမျှော်လင့်ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ ထိုအခါသူတို့သည်ခက်ခဲသောလက်ဖြင့်ပြုမူရန်အဆင်သင့်ရှိသည်။ အဆိုပါ '' အားကြီးသောလက်မောင်း '' ။
လူတိုင်းအတွက်စားစရာအလုံအလောက်မရှိဘူး၊ ငွေလည်းပိတ်ပင်ခံရမှာစိုးလို့လူတွေထိတ်လန့်သွားလိမ့်မယ်။ ဆိုလိုသည်မှာ (အကယ်၍ သင်သည်စူပါမားကက်များအတွက်လိုင်းရှည်ကြီးကိုဖြတ်ပြီးသွားလျှင်) သင် pin ကိုပေးရပြီးအချို့သော ၀ န်ထမ်းများနှင့်ကိုယ်ပိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်သူများသည်ငွေကြေးမပါဘဲကျန်ကြလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်ကတိထားရာနိုင်ငံတော်အကူအညီသည်ဗျူရိုကရေစီယန္တရားကြောင့်ရက်သတ္တပတ်များစွာမှလများစွာကြာမည်။ ။
အခွန်ရုံးကလတ်တလောဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုမှတ်မိလား။ ဒါကကစားခဲ့သည် ဇူလိုင်လ 2019 သေး ထို့ကြောင့်ပြည်နယ်သည်လူမျိုးစုံရုတ်တရက်တိုင်းတာမှုအသစ်များပြုလုပ်ပြီးလူများအားအခြေခံ ၀ င်ငွေရရှိစေရန်အုပ်ချုပ်မှုစနစ်အသစ်တစ်ခုကိုတည်ထောင်ရန်လိုအပ်ပါက၎င်းအားလုံးသည်ယခုချောချောမွေ့မွေ့သွားမည်ဟုသင်မျှော်လင့်နိုင်ပါသလား။ မဟုတ်ပါ။ ဒါဟာအားလုံးလက်တွေ့တွင်အလွန်ရှုပ်ထွေးဖြစ်လာသည်။ လူတွေပိုက်ဆံကုန်သွားတော့အစားအသောက်တွေကုန်သွားတယ်။ ဆာလောင်နေတဲ့လူတွေဘာလုပ်မယ်ဆိုတာကိုသင်ခန့်မှန်းနိုင်တယ်။
များမကြာမီလူအများမေးမည့်မေးခွန်းမှာ -Corona ဗိုင်းရပ်စ်သည်ဤမျှလောက်တန်ဖိုးရှိသဖြင့်အလွန်အန္တရာယ်ကြီးသလား။"
ရင်ဆိုင်ရသည့်အကြီးမားဆုံးမေးခွန်းများမှာ - ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲ ဤတင်းကျပ်သောလုပ်ဆောင်မှုများအားလုံးကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ကိုင်တွယ်သင့်သနည်း။ ကျွန်ုပ်သည်တစ်ခုခုနှင့်သဘောမတူပါကမည်သို့တုံ့ပြန်နိုင်မည်နည်း။
သငျသညျအကြှနျုပျ၏စာအုပ်ကိုဖတ်ရှုကြပါလျှင်ငါသည်ဤမေးခွန်းများကိုအပြည့်အဝဖြေကြားနိုင်ပါတယ်။ ရှင်းလင်းသောအရာတစ်ခုမှာ - သင်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုဖြည့်စွက်ရန်အခြေခံအခွင့်အရေးရှိသည်။
ယခုအခါ coronavirus lockdown အသွင်ဖြင့်သင့်ကိုဖြန့်ကျက်နေသောနည်းပညာအရကွန်မြူနစ်စနစ်သစ်သည်သင်လိုချင်သောအရာကိုမလုပ်ဆောင်လျှင်ဤအခွင့်အရေးအားလုံးကိုဖယ်ရှားပစ်လိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိပါကသင်အဖမ်းခံရလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။ အဲဒါထက်ပိုပြီးလှအောင်လုပ်လို့မရပါဘူး ကျွန်ုပ်သည် ၇ နှစ်တာကာလအတွင်းဒတ်ခ်ျလူမျိုးများကိုသတိပေးရန်နှင့်အွန်လိုင်း smear ကင်ပိန်းများကြောင့်အားလုံးနီးပါးဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ငါလာမယ်ဆိုတာသတိထားမိဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ သို့သော်မျှော်လင့်ချက်ရှိ၏။ အလွန်အစွမ်းထက်သောမျှော်လင့်ချက်ရှိပါသည်။
ဒီဆောင်းပါးရဲ့နောက်အပိုင်းမှာတော့ဒီမျှော်လင့်ချက်ကိုရှင်းပြပြီးသင်ဘာလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းရှင်းပြပါမယ်။ စာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးတဲ့သူကိုသာဒီဖော်ပြချက်ကိုကျွန်တော်ပေးနိုင်ပါတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဒီအခြေခံနားလည်မှုမရှိရင်ငါရေးနေတဲ့အကြောင်းကိုသင်နားမလည်နိုင်ဘူး။ သင်ပထမ ဦး ဆုံးမာစတာဇာတ်ညွှန်းကဘာလဲဆိုတာသိနှင့်သင်ပထမ ဦး ဆုံးဖြစ်ပျက်နေသောအရာ၏အနှစ်သာရကိုနားလည်ရပေမည်။ ပထမ ဦး စွာဖတ်ပါ စာအုပ် ထို့နောက်ဤဆောင်းပါး၏ကျန်ဖတ်ပါ။
မှတ်စု ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာနယ်သာလန်ကိုနှစ်အနည်းငယ်ကနေထွက်ခွာခဲ့ပြီးစုစုပေါင်းပိတ်ဆို့ခြင်းသက်ရောက်နေပြီးဘယ်အချိန်မဆိုအဖမ်းခံရနိုင်တဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှာဖွေမိလို့ပါ။ ဒါကြောင့်ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်မှာဆောင်းပါးအသစ်တွေမတွေ့ရတော့ဘူးဆိုတာခင်ဗျားသိတယ်။
ဤဆောင်းပါးကိုဆက်ဖတ်ရန် (သို့) ဖိုရမ်ဆွေးနွေးမှုများတွင်ပါ ၀ င်ရန်သင်သည် 'သင်၏ပံ့ပိုးမှု' ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်အသင်းဝင်ဖြစ်လာနိုင်သည်။ ဤသည်ကသင့်အားဤဆောင်းပါး၏ကျန်အပိုင်းနှင့်ဖိုရမ်သို့ဝင်ရောက်စေပြီးပိုမိုကောင်းမွန်သောကမ္ဘာအတွက်တိုက်ပွဲတွင်ပါ ၀ င်ပါလိမ့်မည်။ သငျသညျယခုချက်ချင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။ သင်သည်အသင်းဝင်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီး၊ ယူရို ၂ / လ ဖြစ်၍ သင်၏လွတ်လပ်ခွင့်အတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ရန်ကျွန်ုပ်အားကူညီသည်။
source မက်ဆေ့ခ်ျ left: parool.nl, telegraaf.nl, telegraaf.nl, nomorefakenews.com, nos.nl
Corona ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရူးသွပ်စဉ်အတွင်းစာဖတ်သူ martinvrijland.nl သည်သူရဲကောင်းဆန်ဆန်လုပ်ဆောင်မှုကိုပြုလုပ်ပုံရသည်
Tags:: ထို့အပြင်, နည်းလမ်း, စာအုပ်, ကွန်ကရစ်, coronavirus, အနာ, အထူးပြုလုပ်ထားသော, ik, ပိတ်ဆို့ရှာဖွေမှုပြီးမှသာ, မာတင်, ရ, praktisch, လက်တွေ့ကျတဲ့, အကြံပေးချက်များ, အခမဲ့တိုင်းပြည်, Wat
20 မှမတ်လ 2020 09: 40
စာအုပ်ဝယ်လိုက်! ငါသံသယများနှင့်များစွာသောနောက်ကိုလိုက်လိမ့်မယ်မျှော်လင့်ပါတယ်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကျွန်ုပ်သည်အလွန်အမင်းတုန်လှုပ်သွားလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်အခြားနိုင်ငံများကထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားပြီဟုကျွန်ုပ်ဖတ်ရှုသောအခါပြင်းထန်သောကာကွယ်မှုတွင်ရှိနေသည်။ အခြားသတင်းဆိုက်များတွင်လည်းကျွန်ုပ်သည်ယနေ့ညဘုရင်ပြောမည့်အရာနှင့် ပတ်သက်၍ တုန့်ပြန်မှုများကိုဖတ်ရသည်။ “ ဘုရင်ကပြောစရာရှိရင်မင်းကမင်းကိုလာခွင့်ပြုလိုက်ရင်လူတွေဘာကြောင့်ဒီလောက်တောင်ပုန်ကန်ကြတာလဲ” EUH, မဟုတ်ဘူး! ဝေဖန်စဉ်းစားတွေးခေါ်ခွင့်ပြု!
20 မှမတ်လ 2020 11: 24
လူအများကြောက်လန့်တုန်လှုပ်နေကြပြီးနိုင်ငံရေး၊ မီဒီယာ၊ ပညာရှင်များစသည်ဖြင့်အစိုးရနှင့် MSM ကိုဝေဖန်ပြီးသားသူများအပါအ ၀ င်ဟုယုံကြည်သောကြောင့် Mister Smith အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်ယခုအချိန်တွင်လည်းအပြည့်အ ၀ ထိရောက်လာပြီ သူတို့၏အိပ်စက်ခြင်းဟောင်းအခြေအနေသို့ပြန်သွားစေခဲ့သည်။ MSM ၁၀၀% ကိုတစ်ဖန်ပြန်လည်ယုံကြည်ပြီးညတွင်းချင်းပင်အစိုးရအပေါ်သူတို့၏ဝေဖန်မှုများကိုအစိုးရတစ်ခုတည်းအတွက်ပင်မျက်စိကန်းစေခဲ့သည်။
ဆိုလိုသည်မှာသင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိလူ ၉၉ ရာခိုင်နှုန်းသည်အာဏာပိုင်များဟုခေါ်သော“ အာဏာပိုင်များ” ကဲ့သို့သင့်ကိုတိုက်ခိုက်ရန်နှင့်တိုက်ခိုက်ရန်ကြိုးစားလိမ့်မည်ဟုသင်သဘောပေါက်ရန်လိုသည် သွားချင်တယ်
Corona ဗိုင်းရပ်စ်၏အန္တရာယ်နှင့် ပတ်သက်၍ သံသယအနည်းငယ်ကိုဖော်ပြသည့်အခါကျွန်ုပ်သည်ဤအရာကိုတွေ့ကြုံခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ လူတွေဟာနှုတ်ဖြင့်အပြင်းအထန်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီးငါဟာ“ ပိတ်ပစ်ရ” ခဲ့ရပြီး၊ Corona ဗိုင်းရပ်စ်ဟာအလွန်အန္တရာယ်များတယ်ဆိုတာကိုသိထားဖို့လိုတယ်။
၀ န်ကြီး Bruins ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို“ Holllywood” တွင်မှတ်သားထားနိုင်ပြီး“ ကံဆိုးသော” R. Hauer ၏ခြေရာအတိုင်းလိုက်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြသည့်အခါကျွန်ုပ်သည်အွန်လိုင်းတွင်ပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရသည်။ ငါချက်ချင်းဆိုသလို (IM ကတိုက်ခိုက်ခြင်း) ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏စကားများကိုပြန်လည်ယူရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ သူသည်ကျွန်ုပ်မည်သူဖြစ်ကြောင်းနှင့်မည်သည့်နေရာတွင်နေထိုင်သည်ကိုသူသိပြီးသူနှင့်သူ၏သူငယ်ချင်းများထံလာရောက်လည်ပတ်ရန်မိမိကိုယ်ကိုအသင့်ပြင်ဆင်ပေးလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်အားချက်ချင်းပင်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ အခြားဝန်ခံသူများစွာကကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ကြီးချုပ်ကွယ်လွန်သောအခါကျွန်ုပ်၏တုံ့ပြန်မှုကိုခြိမ်းခြောက်သည်ဟုကျွန်ုပ်အားမတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါ။
20 မှမတ်လ 2020 12: 28
နိုင်ငံအသီးသီးတွင်အဆိုပြုထားသည့်အတိုင်းရဟတ်ယာဉ်ငွေသည်ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးစနစ်၏သော့ချက်ဖြစ်သည်။ Corona ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ၀ င်ငွေဆုံးရှုံးသွားသောသူများနှင့်၎င်းတို့ရွေးချယ်သည့်အခါငွေပမာဏကိုကတိပေးမည်ဟုဆုံးဖြတ်ထားသောကြောင့်ငွေပမာဏကိုအခြေအနေများအောက်တွင်လက်ခံရန်ရွေးချယ်လိမ့်မည်။
20 မှမတ်လ 2020 12: 29
ရာဇ ၀ တ်မှုဝါဒဖြန့်သည်
20 မှမတ်လ 2020 18: 16
၎င်းနောက်နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိအကြီးဆုံးသတင်းအတုသတင်းစာဖြစ်သည့် De Telegraaf (အွန်လိုင်းဗားရှင်း) တွင်“ ဖွယ်ရှိသည့်အတုအယောင်သတင်း” သေးငယ်သည့်သတင်းစကားနောက်လိုက်သည်။ လူတစ် ဦး (၎င်းသည်အငြင်းပွားမှုများအားပိုမိုအားဖြည့်ရန်၊ မွတ်စလင်မ်များစသည်ဖြင့်မွတ်စလင်ဖြစ်သည်ဟုနာမည်နှင့်အရှက်အားဖြင့်ဖော်ပြခြင်း) ရဲအရာရှိတစ် ဦး ၏မျက်နှာကိုခေါက်လိုက်သဖြင့်ချက်ချင်းပင်ထောင်ဒဏ် ၁၀ ပတ်ချမှတ်ခံရသည်။ ပြစ်တင်ဝေဖန်။
အများပြည်သူအနေဖြင့်ချောင်းဆိုးခြင်းအားထောင်ဒဏ်ချမှတ်နိုင်သည် (၎င်းကိုအမြဲတမ်းမိတ်ဆက်နိုင်သည်၊ တုပ်ကွေးနှင့်အတူချောင်းဆိုးခြင်းနှင့်လည်းသက်ဆိုင်သည်) အတွက်အနာဂတ်စစ်မှန်သောဥပဒေပြfor္ဌာန်းချက်များအတွက်တစ္ဆေများအားနှိပ်နယ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။
20 မှမတ်လ 2020 18: 42
ဟုတ်တယ်ငါဖတ်တယ် အထူးသဖြင့် ကျေးဇူးပြု၍ အချက်ပြသံကိုကျွန်ုပ်ပေးပို့လိုက်ခြင်းမှာ -“ မင်းဟာထောင်ထဲကိုအနည်းငယ်ရယ်၊ ပုန်ကန်သောအပြုအမူအနည်းငယ်ဖြင့်ထောင်ထဲသွားသည်။ ကျင့်သုံးပါ။ ” ဟုတ်ကဲ့၊ မွတ်စ်လင်မ်တို့၏အထင်သေးမှုသည်နောက်တဖန်ကောင်းမွန်စွာတိုးတက်နေသည်။ နောက်ဆုံးတွင်မီးတောက်သည်ဖရိုဖရဲဖြစ်လာသည်နှင့်တပြိုင်နက်ဒယ်အိုးထဲ၌ဝင်သွားရမည်။ သူတို့ကလူထုအုံကြွမှုကိုလိုချင်တယ်။ ဒေသခံတွေနဲ့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေအကြားပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ချင်တယ်။
20 မှမတ်လ 2020 20: 56
မင်္ဂလာပါ ။ သင်ရေးသားခဲ့သောဆောင်းပါးအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ မာတင်အားကျွန်ုပ်တို့ကို ပို၍ သတိထားမိစေသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အသင်း ၀ င်သစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးသင့်အတွက်မေးခွန်းအချို့ရှိပါသည်။ ဒီအခြေအနေမှာမွတ်စလင်မ်တွေကိုဘာအကြံပေးချင်ပါသလဲ။ ဒီစစ်ပွဲမှာလက်နက်တွေသုံးလိမ့်မယ်လို့မင်းထင်လား၊ ဒါကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလား။ ကျွန်တော်တို့နယ်သာလန်မှာဘယ်လောက်ကြာကြာသော့ခတ်ထားရမယ်ဆိုတာကိုလည်းသင်သိပါသလား။ တနည်းအားဖြင့်ဥရောပနယ်နိမိတ်အတွင်း? ဥရောပပြင်ပရှိမိသားစုများအတွက်လည်းပြaနာဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်အပါအ ၀ င်မည်မျှကြာကြာမမြင်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လူများအားအချိန်နှင့်စိတ်ဆိုးစေနိုင်သည်။ ဒီအခြေအနေဟာဒီနွေရာသီမှာဖြစ်ပျက်ပြီးပြီလို့ခင်ဗျားထင်ပါသလား။ သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို 2023 ဆီသို့ ဦး တည်? မည်သည့်နိုင်ငံတွင်ကျန်နေခဲ့ပြီးလူများကိုကာကွယ်ဆေးထိုးမခံပါသနည်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကာကွယ်ဆေးမှထွက်ပြေးနိုင်သည်ဟုသင်ထင်ပါသလား။ ဒါ့အပြင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတစ်ခုခု။ သင်ဟာပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုမှာရောက်နေပြီလို့ပြောခဲ့တယ် သင်ကိုယ်တိုင်ယင်းကိုမမြင်တွေ့ဖူးခြင်းသို့မဟုတ်အခြားအကြောင်းပြချက်များကြောင့်သင်မချန်မထားခဲ့ခြင်းမဟုတ်လော။ လုံခြုံစိတ်ချရမည့်နေရာကိုမသိပါ။ လူအနည်းငယ်သို့မဟုတ်တစ်ခုခုရှိသည့်ကျွန်းတစ်ကျွန်းလော။ သို့မဟုတ်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောတိုင်းပြည်? ကျေးဇူးတင်ပါတယ်🙂
20 မှမတ်လ 2020 21: 10
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် လွန်ခဲ့သော ၂ ပတ်မှဆောင်းပါးများကိုဖတ်ပါ၊ ပြီးနောက်သင်၏မေးခွန်းများအတွက်အဖြေများကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ငါသည်လည်းစာအုပ်ဖတ်ဖို့အကြံပြုလိုတယ်၊ ထို့အပြင်မွတ်စလင်များအတွက်။
ငါငွေရေးကြေးရေးနည်းလမ်းမရှိသောကြောင့်, ငါစွန့်ခွာခဲ့ပါဘူးဒါပေမယ့်လည်းသင်ကမ္ဘာပေါ်မှာဘယ်မှာအရေးမကြီးဘူးဆိုတာသိတယ်။ ဤသရဖူသည်လူစီဖာ၏အစီအစဉ်ကိုရောင်ပြန်ဟပ်သည် (စာအုပ်ကိုကြည့်ပါ) ။
20 မှမတ်လ 2020 21: 38
ထို့အပြင်မိနစ် ၁ နှင့် ၅၈ တို့ကိုလည်းဂရုပြုပါ -“ တုပ်ကွေးရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးဆေးထိုးပြီးပြီ”
20 မှမတ်လ 2020 21: 39
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မင်းစာအုပ်ကိုကြိုတင်မှာယူပြီးပြီလားငါစာအုပ်တွေကိုဘယ်တော့မှမဖတ်တော့ဘူး။ အခုလာရတော့မယ်
20 မှမတ်လ 2020 12: 50
၀ န်ကြီးများကောင်စီအတွင်း ၀ န်ကြီးများသည်ယနေ့ကောင်းသောစံနမူနာပြနေကြသည် - ၎င်းတို့သည်သေသပ်စွာလှပသောနေရာများဖြစ်သည်။
20 မှမတ်လ 2020 13: 27
မာတင်နဲ့ဒီ site ရှိပိုစတာတွေကိုမင်းပြောတာကမင်းကသူရဲကောင်းတွေပဲ။ မာတင်ကဒီကမ္ဘာပေါ်မှာမင်းရဲ့အလုပ်ပဲ 'ဘုရား' ဒါမှမဟုတ်ဘယ်သူ့ကိုမှပေးတာမဟုတ်ဘူး။
ကျွန်ုပ်သည် 'ခရစ်ယာန်' မဟုတ်သော်လည်းကျွန်ုပ်ရည်ညွှန်းလိုဆဲဖြစ်သည်
iansဖက် ၆း၁၁ တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အသွေးအသားနှင့်သွေးကိုတွန်းလှန်။ အမှောင်ထု၏အုပ်စိုးရှင်များကိုတိုက်လှန်နေခြင်းဖြစ်သည်။
20 မှမတ်လ 2020 14: 02
ကျေးဇူးပြု၍ မှတ်သားပါ။ ဤသည်မှာကျွန်ုပ်၏နောက်ဆုံးဆောင်းပါးဖြစ်သည်။
ဗိုင်းရပ်စ်အစစ်အမှန်ကိုဖယ်ရှားနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ကြည့်ရှုသူများအောက်တွင်ရှိကြသည်။ သင်တို့နှင့်အတူရှိစေခြင်းငှါ၊
20 မှမတ်လ 2020 20: 41
သင်၏ဆောင်းပါးများကိုမာတင်နှင့်တုံ့ပြန်မှုများသည်ဤအတိုင်းအတာများ၌မြည်နေ ဦး မည်။ ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်အရာကမျှလုပ်ဆောင်။ မရနိုင်ပါ၊ ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးကိုလုပ်ထားပြီးဖြစ်သည်၊
လူတွေကပဟေlesိတွေကိုအတူတကွစုစည်းတဲ့အခါမှာမမျှော်လင့်ဘဲကြီးထွားလာပြီးဒီကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့ဘုရားတွေအပါအ ၀ င်အရာအားလုံးနဲ့လူအားလုံးအပေါ်မှာမြင့်တက်လာတယ်။
ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေးများ၏မူလဖခင်နှင့်အဆက်အသွယ်ရပြီး၊ ဤလောကအပြင်ဘက်ရှိစစ်မှန်သောဘုရားသခင်နှင့်အဆက်အသွယ်ပြုသည်။ ဒီမှာလှိုင်းနှုန်းကအရမ်းနည်းလို့ဒီကိုမလာနိုင်ဘူး။ စစ်မှန်သောအလင်း၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်အမှန်တရားအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်ကိုပြနိုင်သည်။
အပေါ်ကလိမ္မော်ရောင်၊ နေကအထက်ပါ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်စကားမပြောမိပါစေနဲ့။
20 မှမတ်လ 2020 23: 36
xanders နှင့်ပတ်သက်လျှင် xandernieuws သည်ငါစိုးရိမ်မိသည့်အတိုင်းကျဆင်းခဲ့သည်။ ခရစ်ယာန် ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်သည်စိတ်ဆင်းရဲမှုမျိုးကိုကြွားခြင်းထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်ဟုငါပြောနိုင်သလား။
ငါအပြုသဘောဆောင်တဲ့မှတ်ချက်တင်ခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်နည်းပညာဆိုင်ရာအမှားကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်, တင်ထားမည်မဟုတ်ပါ
20 မှမတ်လ 2020 23: 55
ဟုတ်ပါတယ်၊ Xander ဟာကြောက်လန့်နေလိမ့်မယ်
21 မှမတ်လ 2020 11: 19
xander သတင်းသည်အတိုက်အခံမဟုတ်ကြောင်း (သို့သော်မှားနိုင်သည်) ကျွန်ုပ်သည်ဝေဖန်စဉ်းစားရန်နိုးနေသူကိုမမြင်နိုင်ပါ။ ၎င်းသည်လူ ဦး ရေ၏ ၉၉% အတွက်ကြီးမားသောပြproblemနာဖြစ်ပြီး၎င်းသည် ဒီကမ္ဘာကြီးကိုတိုက်ရိုက်ရောက်အောင်တိုက်ရိုက်) လွတ်လပ်သောသတင်းသည်ဤအပေါ်မှအောက်သို့ရောက်ရှိနေသည့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအစုလိုက်အပြုံလိုက်ခြိမ်းခြောက်မှုများဖြစ်ပေါ်စေသည်။
21 မှမတ်လ 2020 11: 33
coronavirus ကြောက်ရွံ့မှု (နယ်သာလန်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေး) ကိုမြှင့်တင်တဲ့နေရာမှာ Xander ကစာဖတ်သူတွေရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုဖမ်းယူနိုင်ဖို့ကျွန်တော့်စခန်းကိုစောစောစီးစီးပြောင်းရွှေ့ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်ဆိုတာပဲကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ ယခုသူသည်သူ၏စစ်မှန်သောမျက်နှာကိုပြသသည်။
21 မှမတ်လ 2020 11: 53
ကောင်းပြီ၊ ဒါကငါတို့ကိုမအံ့သြသင့်ဘူး။ ၎င်းပြန့်ပွားသောအများစုသည်သင်သိသောအရာများဖြစ်သည်။ သာမန်လူများအားအပျက်သဘောဆောင်သောကြောက်ရွံ့မှုဝါဒဖြန့်ရန်သူတို့က 'illuminati' mannequins ကိုအသုံးပြုကြသည်။ သူတို့အစီအစဉ်အတွက်သူတို့ကြိုက်တယ်။ အံ့ is စရာကောင်းတာကသူတို့ထဲမှဘယ်သူမှဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်ပွားပြီးအမှန်တကယ်မသေဘူးဆိုတာသိသာထင်ရှားတယ်။
သူတို့ကထိုလုပ်ရပ်ကိုအကန့်အသတ်ဖြင့်မလိုချင်သည်မှာထင်ရှားသည်။ လူတို့သည်မကောင်းသောအကြံအစည်များအတွက်မကျဘဲအပြုသဘောမရှိကြပါ။ ဖြေရှင်းပြီးသောအခါသာမန်လူများထံမှအမှန်တရားကော်မရှင်များသည်သူတို့၏ကုန်သွယ်ရေးသို့လာရောက်ပြီးတောင်အာဖရိက၌ကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်။ သာမန်လူတွေလိုချင်ရင်ဒါကဖြစ်နိုင်တယ်။
« ဒေါက်တာ၏ Coronavirus ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ကောင်းသောထိုးထွင်းသိမြင်မှု Wolfgang Wodarg?
စုစုပေါင်း coronavirus ပိတ်ဆို့ခြင်းလာသောအခါနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်: စမ်းသပ်မှုပို့စ်များနှင့်စစ်တပ် »
guppy op David Icke London စစ်မှန်သောဆင်ဆာလုပ်ထားသောဗွီဒီယို - Icke သည်အမှန်လား၊ အတုလားလားဒါမှမဟုတ်အမှန်တရားဟာထောင်ချောက်ဆင်ခြင်းနှင့်ရောနေသလား။
Riffian op မီတာတစ်ဝက်ခွဲလူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်အက်ပလီကေးရှင်းများမိတ်ဆက်ခြင်းဖြစ်သော Mark Rutte နှင့် Hugo de Jonge တို့၏သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ
ဟယ်ရီအေးခဲ op David Icke London စစ်မှန်သောဆင်ဆာလုပ်ထားသောဗွီဒီယို - Icke သည်အမှန်လား၊ အတုလားလားဒါမှမဟုတ်အမှန်တရားဟာထောင်ချောက်ဆင်ခြင်းနှင့်ရောနေသလား။